BBC Soomaali oo soo saartay App cusub oo laga heli karo maqal iyo qoraal - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Amelia Fernandez-Grandon
APP-ka cusub ee BBC Soomaali
Wararka iyo barnaamijyada idaacadda BBC Somali waxaa hadda laga heli karaa App-ka bilaashka ah ee BBC Somali oo dunida meeshaad ka joogtaba aad la soo bixi kartid.
App-kan oo ay iska kaashadeen BBC World Service iyo AudioNow, waxaa laga geli karaa telefoon, mobile, tablet ama aalad kasta oo lagu xiro. Waxaa sidoo kale laga heli karaa iOS iyo Android (adiga oo sii maraya AudioNow Digital)
Waxaad gashaa Google ama Apple app store, kuna raadi magaca BBC Somali oo si bilaash ah u soo degso BBC Somali App.
BBC Somali App-ka sida fudud aad u taaban kartid wuxuu ku siinayaa barnaamijyada idaacadda, iyo qiimaha caadiga ee shirkadaha teleefoonada dalalka qaarkood kugu soo dallici karaan. Wararka caalamka iyaga oo kooban oo qoraal ah oo bilaash ah ayaad sidoo kale ka heli kartaa.
App-ku wuxuu siinayaa dadka meel ay ka wici karaan teleefoon lambar qiimihiisu aanu ka badnayn inta caadiga ah oo aad ku dhagaysan kartid idaacadda (Waa u bilaash macamiisha sita mobile-ka shirkadahoodu daqiiqadaha bilaashka ah bixiyaan) Adiga oo isticmaalaya tiknoolajiyadda (IVR) oo ah qaab ay dadku ku heli karaan app-ka, haday joogaan dalalka UK, US, Nigeria, Kenya, South Africa, Sweden, Norway iyo Australia. Farriin muuqaal iyo cod ah ayaa la siinayaa qofka marka ugu horreysa, taas oo lagu xaqiijinayo in dhageystayaashu ka war helaan haddii lacag lagu soo dallacayo marka ay lambarkaa wacayaan.
Weriyeyaasha BBC, Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo bidix xiga iyo Xasan Haybe
Dhageystayaashu waxay kala doorbidi karaan in ay cod ahaan internet uga dhageystaan ama teleefoonka ay ku wacaan, iyadoo ay ka go'ayso data internet-ka oo aad u yar ilaa xad macquula.
BBC Somali App waxaad ka helaysaa qodobada wararka ugu waaweyn iyo warka oo kooban bbcsomali.com. Waxaa intaa dheer, adiga oo dhag siiya warka oo kooban waxay u qaadeysa qofka isticmaalaya bogga halkaasi uu ka akhrisan karo wararkoo faahfaahsan.
Agaasimaha BBC World Service, qaybta horumarinta shaqada, Simon Kendall, ayaa yiri: "BBC-da qaybteeda dunida la hadashaa waxay aad u dooneysaa in ay dhageystayaasha kula xiriirto aalado waxaanay goob walba ugu tabinaysaa wararka, sameynta App-ka BBC Somali wuxuu naga caawinayaa in aan gaarno bulshada Soomaalida ee caalamka oo dhan ku nool."
Tifaftiraha BBC Somali, Caroline Karobia, ayaa tiri: "BBC Somali waxay ku xooggan tahay raadyowga, waxaana toddobaadkii dhageysta ilaa 3.4 milyan oo qof oo ku nool gudaha Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo dalal kale - iyadoo inta badan ay ka soo galaan mobile-ka bbcsomali.com. Farsamada maqalka ee sida App-kan cusub ee BBC Somali App wuxuu u adeegayaa dhageystayaasha mobile-ka, oo uu ka caawinayo inay si toos ah u helaan macluumaad cod iyo qoraal ah."
BBC Somali waxay qayb ka tahay BBC World Service.
AudioNow waa shirkad Mareykanka laga leeyahay, oo adeegyada teleefoonka iyo apps u sameysa hey'adaha caalamiga ee warbaahinta. App-kan cusub wuxuu sii xoogjinayaa adeeggii dhageysiga telefoonka ee ay AudioNow hore u siineysay BBC, kaasi oo Mareykanka oo keliya ka jiray, waxaana bishiiba barnaamijyada raadyowga BBC Mareykanka ka soo waca hal milyan oo qof.
*Dadka isticmaalaya waxaa lagula talinayaa in ay marka hore ka hubiyaan shirkadaha ay mobile-ladooda sitaa qiimaha ay ku wici karaan lambarka telefoonka laga dhaysan karo BBC Somali.